သာသနာနှင်.ကြုံတုန်းကြုံတိုက်.... | LAMINTAYAR
You're beautiful လို.အမည်ရပါတယ် ...LYRICS နဲ.တင်ထာ...
တရားတော်များကို နားထောင်ကြည်.ရူ. နာကြားနှိင်ရန် အေ...
ဣတ္ထိယ မျိုးဗီဇ ရှာပုံတော်နှင့် လက်တွေ့ဘ၀ထဲက မိန်းမ...
ကျွန်တော်.၏ အနှိုင်းမဲ. မေတ္တာရှင် မေမေ သို. .....
စိုင်းစိုင်း၇ဲ. မျောလွင်.နေတဲ.တိမ် VERSION အသစ် လေ...
Lady Gaga ရဲ. Bad Romance ဖြစ်ပါတယ် သူ.ရဲကျော်ကြား...
Timbaland ရဲ.သီချင်းကောင်းလေးပါ မိတ်ဆွေများနားထောင...
ဒီသီချင်းလေးက ကျွန်တော် တော်တော်နှစ်သက်တဲ.သီချင်းေ...
*တကယ်မသေခင် အစမ်းသေကြည့် ကြရအောင်*
ဗုဒ္ဓအမေးအဖြေ...... နိုင်ငံခြားသား ဘုန်းတော်ကြီး တစ...
မြန်မာပြည်မှ user မိတ်ဆွေများအတွက် FIRE FOX့ ကိုအဆ...
လူဘဝ၏အောင်မြင်ခြင်းသို့ သွားရာ လှေကားထစ်များ
ကျွန်တော်.၏ ဇာတာ အနိမ်.အမြင်....
BURMA VJ အော်စကာဆုရရန် အလားအလာကောင်း
Posted by lamintayar at 6:34 AM Labels: ဘာသာရေး..........
သာသနာပြုတယ်ဆိုတာ လူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ထဲမကောင်းမှု့တွေပျောက်ပြီး ကောင်းတဲ့စိတ်တွေရောက်လာအောင်ဟောပြောပြသပေးတာကိုခေါ်တာပါ။ သာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးအစားခွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်
၂။ သာသနာကိုကြိုက်သော်လည်း မကြုံသောသူ
၃။ သာသနာနှင့်ကြုံလည်းမကြုံ၊ ကြိုက်လည်းမကြိုက်သောသူ
၄။ သာသနာနှင့်ကြုံလည်းကြုံ၊ ကြိုက်လည်းကြိုက်သောသူ ဆိုပြီး၎မျိုးရှိပါတယ်။
သာသနာနှင့်ကြုံသော်လည်း၊ မကြိုက်သောသူဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီး ၀ိပသနာတရားကို နာကြားအားထုတ်ခြင်းမပြုတဲ့သူတွေကိုပြောတာပါ။ ဒါန၊ သီလ၊ သမထဆိုတဲ့လောကီကုသိုလ်များကတော့ သာသနာပမှာလည်းရှိပါတယ်။ အချိန်မရွေးလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်။ ၀ိပသာနာ တရားကတော့ သာသနာငါးထောင်အတွင်းမှာသာရနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ ၀ိပသာနာတရားဆိုတာ ညဏ်ပညာအရာသာဖြစ်ပြီး သားရေး၊ သမီးရေး၊ စီးပွားရေးနှင့်တွဲပြီး ရှုပွားလို့ရပါတယ်။ သမထလို အလုပ်မရှုပ်ပါဘူး။
နံပါတ် ၂ အမျိုးအစားကတော့ တစ်ယောက်ပဲရပါတယ်။ သူကတော့ မြတ်စွာဘုရား ခမည်းတော် သုဒ္ဓေါဒန မင်းကြီးကိုးကွယ်တဲ့ ကာဋ္ဌဒေ၀ီလရသေ့ကြီးပါ။ ဒီရသေ့ကြီးဟာ သမထကမဌာန်းတွေအားထုတ်လိုက်တာ ရှိသမျှ ဈာန်တွေ။ အဘိညဏ်တွေအကုန်ရပြီး မြေလျှိုး၊ မိုးပျံ၊ ကိုယ်ပျောက် စတာတွေအကုန်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဘုရားမပွင့်သေးတဲ့ကာလဆိုတော့လည်း သူ့ကိုအမြတ်ဆုံးလုပ်ပြီးကိုးကွယ်ကြပါတယ်။တစ်နေ့တော့ နတ်ပြည်ရဲ့ဆိတ်ငြိမ်ရာနေရာမှာရောက်နေတုန်း နတ်သား၊ နတ်သမီးတွေ တခဲနက်အော်တဲ့အသံကြားလို့မေးကြည့်တော့ လူပြည်မှာဘုရားအလောင်းမွေးဖွားပြီးဆိုတာတွေ့သွားတယ်။ဒါကြောင့် ချက်ချင်းအဘိညဏ်တန်ခိုးနဲ့ သုဒ္ဓေါနမင်းကြီးနန်းတော်ထဲကြွသွားပြီး ဘုရားအလောင်းကို သွားကြည့်တော့ မင်းကြီးကိုယ်တိုင်မွေးကာစ နီတာရဲဘုရားအလောင်းကိုယူပြတာပေါ့။ ရသေ့ကြီးရှေ့လည်းရောက်ရော မင်းကြီးကဘုရားအလောင်းရဲ့ လက်ကလေးနှစ်ဘက်ကိုကိုင်ပြီး ရသေ့ကြီးကို ဦးတော်လုပ်ပေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ ဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ရသေ့ကြီးရဲ့နဖူးထိပ်နားထိ အလိုလိုမြောက်တက်သွားတယ်။ ငါ့ကို ရှစ်ခိုးရမယ်လို့မပြောသော်လည်းပြောသကဲ့သို့နဖူးထက်မှာသွားတည်တာပါ။ ရသေ့ကြီးလည်း ခြေအစုံကိုတရိုတသေဆုတ်ကိုင်ရင်း ဘုရားတစ်ကယ်ဖြစ်မဖြစ်ကို တန်ခိုးနဲ့ဆင်ခြင်တယ်။ ဘုရားတစ်ကယ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာလည်းမြင်ရော တရိုတသေ ရှစ်ခိုးတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် ဘုရားအလောင်းဟာလည်း မင်းကြီးရင်ခွင်ထဲပြန်ကျသွားတယ်။ အဲဒီအချိန်ကျမှ ရသေ့ကြီးဟာ အားပါးတရ ရယ်ခြင်းကိုပြုသလို ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုခြင်းကိုလည်းပြုတယ်။
မင်းကြီးကအမေးရှိတဲ့အခါ ရသေ့ကြီးက `မင်းကြီးသားတော်ဟာ ဘုရားစစ်စစ်ဧကန်ဖြစ်လိမ့်မယ်။သင်နဲ့တကွဝေနေယျအများစုဟာ သင့်သားဘုရားရဲ့ဝိပသာနာတရားတွေကိုနာကြားကြရပြီး မဂ်ဖိုကိုရကြလိမ့်မယ်။ သံသရာတစ်လျှောက်လုံး အပယ်ဘေးကနေတစ်ကယ်ဝေးကြရမယ်။ သင်တို့လိုဝေနေယျတွေအတွက်ဝမ်းသာလွန်းလို့ငါရယ်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ သင့်သားဘုရားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာငါကတော့ ရုပ်တရားမရှိဘဲ၊နာမ်တရားသာရှိတဲ့အရူပဗြဟာဘုံကိုရောက်နေပြီးကမ္ဘာပေါင်း၈သောင်း၎ထောင်ဒီအတိုင်းဘဲအချိန်ကုန်ရတော့မယ်။သင့်သားဘုရားရဲ့သစöာတရားကိုနာကြားခွင့်မရတော့ဘ၀သံသရာမှာဘုရားသာသနာကိုမမှီလိုက်ရတဲ့အတွက်အရှုံးကြီးရှုံးရပြီ။ အဲဒီအတွက်ငိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်´ လို့ရှင်းပြပါတယ်။
တတိယမြောက်အမျိုးအစားကဖြစ်တဲ့ သာသနာနဲ့မကြုံလည်းမကြုံ၊ မကြိုက်လည်းမကြိုက်တဲ့ သူတွေကတော့အပါယ်ဘုံသားတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာသာသနာကိုသာသနာမှန်းတောင်မသိတဲ့အတွက် သာသနာနဲ့မကြုံဘူးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြိုက်ရမှန်းလည်းမသိနိုင်တော့ပါဘူး။
နောက်ဆုံးလေးခုမြောက် သာသနာနဲ့ကြုံလည်းကြုံ၊ ကြိုက်လည်းကြိုက်သူကတော့ ဒါန၊သီလ၊သမထတင်မက ၀ိပသာနာဘာဝနာကိုပါပွားများအားထုတ်နေကြသူတွေပါ။
သာသနာနှစ် ၂၄၀၀ကျော်ကျန်သေးတယ်ဆိုပေမဲ့ ဒီနေ့သေရင်နက်ဖြန်သာသနာဟာ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အသေမဦးခင်၊ ညဏ်ဦးအောင် ကြိုးစားပါလို့တိုက်တွန်းထားတဲ့ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ သြ၀ါဒကို လိုက်နာသင့်ကြပါတယ်။
လူဟာ ငါစွဲဒိဋ္ဌိမပျောက်ဘဲ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ စတဲ့မည်သည့်စိတ်နဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ်သေသွားမယ်ဆိုရင်အပါယ်လေးဘုံကို ကျိန်းသေကျပါတယ်လို့အမှာရှိထားပါတယ်ဆိုတာကို သတိပြုစေချင်ကြပါတယ်။
နောင်မှနောင်တရပြီး တန်ဖိုးကိုသိရတဲ့အရာ ၃မျိုးရှိပါတယ်။
၁။ ကျန်းမာရေးတန်ဖိုးကိုကို မကျန်းမာတဲ့အချိန်မှသိရပါတယ်။
၂။ တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးတန်ဖိုးကို သူ့တစ်ပါးကျွန်ဖြစ်မှ သိနိုင်ပါတယ်။
၃။ လူဘ၀တန်ဖိုးကိုတော့ ငရဲပြည်ရောက်မှ သိနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း စတုတ္တမြောက်သာသနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။
မှတ်ချက်။ ။ အရှင်ဇ၀န(မေတ္တာရှင်) ၏ ၀ိပသာနာတရားတော်မှ ထုတ်နုတ်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။